Dib-u-fiirin deg deg ah - Barnaamijka Saafidda Macluumaadka Webka ee Mashaariicdaada Internetka
The shabakadda waxaa lagu dari karaa daalacayaasha webka. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad farta ku fiiqdid goobaha xogta aad raadineyso inaad soo ururiso, qalabkani wuxuu kuu qaban doonaa inta kale ee adiga. Waxaa loogu talagalay ganacsatada iyo khabiirada waxayna u baahan yihiin xirfado farsamo - appraisal of a business. Qaar ka mid ah qalabkaan waxay ku habboon yihiin Windows halka kuwa kale ay u fiican yihiin isticmaalayaasha Linux.
1. 80 lugood
80 boggu waa shabakad caan ah iyo adeeg ka saarista xogta. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto oo aad maamusho webka si aad u hesho natiijooyinka la rabo. 80legs waxaa lagu dhisay korka shabakada shabakada ee shabakada xisaabta iyo macluumaadka xoqidda bogagga kala duwan ee dhowr bog gudahood.
3. Soo dejinta. io
Soo dejinta. Io waa mid wax ku ool ah oo lagu kalsoonaan karo qalab wax lagu tirtiro . Waxay ku haboon tahay shirkado madaxbannaan in ay soo saaraan shahaadooyinka caalamiga ah waxayna kobcin karaan cilmi-baaristaada. Waxay u fiican tahay suxufiyiinta waxayna ka caawisaa inay ururiyaan macluumaadka laga helo boggaga internetka ee kala duwan. Qalabkan xogta ah ayaa ka dhigaysa saaS alaabta, oo kuu suuragelinaya inaad ku beddesho macluumaadka ceymiska foomamka loo baahan yahay.
Isku xidhnaanta tiknoolajiyada barashada mashiinka horumarsan, Dexi. Io waa cajiib ah mid ka mid ah shabakada internetka ee shabakada ugu daba-dheer ee shabakadda internetka. Waxaa soo saarey Henrik, barnaamijka kombiyuuterka, wuxuuna naqshadeynayaa geeddi-socodka xoqista xogta ku siinaya natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Dexi's Intelligent Automation Platform ayaa lagu kalsoon yahay in ka badan 20 kun oo shirkadood sida Samsung, Microsoft, Amazon, iyo PwC.
Webaas. Io wuxuu ka caawiyaa shirkadaha inay soo uruuriyaan, xoqaan una abaabulaan xogta si habboon oo wax ku ool ah. Waa barnaamij barxad ku salaysan oo sahlan in la isticmaalo isla markaana si deg-deg ah natiijada loo hirgeliyo. Webhouse. Io waa beddel aad u fiican Mozenda, waxaana lagu dari karaa heerarka qaybta ganacsiga. Isticmaalida qalabkan, waxaad daabici kartaa natiijooyinka TSV, JSON, CSV iyo qaababka XML.
Scrapinghub waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu faa'iidada badan ee faa'iido leh oo la isticmaalo. Waxay noo ogolaaneysaa inaan xoqno ama soo saaro bogaga internetka oo aan lahayn aqoonta barnaamijka. Waxaa intaa dheer, Scrapinghub wuxuu na siinayaa awood ku saabsan shabakadaha internetka ee cinwaanada IP-yada ama goobaha kala duwan.
7. Muuqaal Sawir leh
Muuqaal Sawir leh waa mid aad u fiican in laga soo saaro xogta laga helo sawirrada iyo faylasha PDF. Way ku adag tahay shirkadaha iyo barnaamijyadaba in ay ururiyaan macluumaadka laga helo goobaha warbaahinta bulshada, laakiin sawir qaadaha ayaa ka qaadi kara macluumaadka laga helo Facebook iyo Twitter sidoo kale. Tikidhada internetka waxay kuu fududeyneysaa inaad ku muujiso bogaggaaga boggaaga iyo hagaajinta waxtarka guud ee goobtaada.
8. Hubinta Hub
Hubinta Hubka waa barnaamij macquul ah oo shabakadeed. Waxaa loogu talagalay in lagu xoqo macluumaadka laga helo ilaha maxalliga ah iyo kuwa internetka waxayna aqoonsadaan URLs, sawirada, dukumiintiyada webka iyo odhaahyada, samaynta shaqadaada si sahlan iyo ka wanaagsan. Waxay bixin kartaa wax-soo-saarka labadaba qaabab aan toos ahayn oo habaysan oo dhoofiya xogtaada si ay u faafiyaan.